यस्ता पेय पदार्थ जसले तौल घटाउछ | Khabar Express Tv
यस्ता पेय पदार्थ जसले तौल घटाउछ
खबर एक्सप्रेस २०७८-०३-२३ ०३:२५ मा प्रकाशित Total Shares: 74
काठमाडौं - दिनभर क्यालोरी बढाउने खानेकुराको सेवनले शरीरको तौल निकै तीव्र गतिमा बढ्ने गर्छ । धेरै क्यालोरीको सेवनले शरीरमा बोसो जम्मा हुन जान्छ । यस्तो समयमा तौल क मगर्न जुस वा तरल पदार्थ पिउन सकिन्छ । सागसब्जीका जुस वा तरल पदार्थ पिउँदा शरीरको तौल तीव्र रुपमा घट्दै जान्छ ।
यद्यपि, खराब जीवनशैली र खानपानका कारण तीव्र गतिमा तौल बढ्न सक्छ । कहिलेकाँही व्यायाम, योग र घरेलु उपायहरु अपनाउँदा पनि तौल घट्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले क्यालोरी कम भएको खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । धेरै क्यालोरी भएको खानेकुरा खाँदा शरीरमा तीव्र रुपमा फ्याट जम्मा हुन जान्छ । त्यसैले यस्तो क्यालोरी र बोसो कम गर्न हप्तामा एकपटक जुसको सेवन गर्नुपर्छ ।
तौल कम गर्ने पेय पदार्थ कसरी बनाउने ?
तौल कम गर्ने पेय पदार्थ निर्माण गर्नका लागि १०० ग्राम काँक्रो, १०० ग्राम पालक, १५० ग्राम भुँइकटहर, आधा चम्चा थिचेको अदुवा, १५ देखि २० पात पुदिना र कागती लिने । त्यसपछि काँक्रो, पालक, भुँइकटहरलाई सानो सानो टुक्रामा काट्ने त्यसमा थोरै पानी हालेर त्यसलाई पिस्ने र त्यसलाई छानेर जुस निकाल्ने । यसरी निकालेको जुसलाई हप्तामा एक पटक पिउँदा शरीरको तौल सहज तरिकाले घट्ने गर्छ ।
कसरी घट्छ तौल ?
यो पेयपदार्थले शरीरलाई आलस्य र ढिलासुस्ती हुनबाट बचाउँछ । यो पेयपदार्थले शरीरलाई डिटोक्स गराउँछ । शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ । यो पेयपदार्थमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ । जसले रोगप्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्छ । यसले शरीरलाई सुख्खा हुन दिँदैन । यो पेयपदार्थमा मेटाबोलिज्म धेरै हुने भएकाले तीव्र गतिमा तौल घट्छ ।
कहाँबाट कति खोप आयो, कति आउन बाँकी ?
विश्वका १३२ देशमा डेल्टा भेरियन्ट फैलिएको डब्लुएचओको दाबी
कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न पूर्वतयारी गर्न निर्देशन
मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा सत्यता छैनः मन्त्री शर्मा
काेराेना अपडेट: थप २ हजार ३३५ मा कोरोना पुष्टि, १ हजार ३७३ जना संक्रमणमुक्त, १६ जनाको मृत्यु
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई बिमा रकम हस्तान्तरण
अमेरिकामा शक्तिशाली भूकम्प
कृषि मन्त्रीलाई डेंगू संक्रमण
विप्लव नेकपाको नेपाल बन्दले देशभरको जनजीवन प्रभावित, शैक्षिक संस्था पूर्णरुपले ठप्प
खबर एक्सप्रेसद्वारा संचालित
निमित्त समाचार संयोजक: विश्वराम सुनुवार
टेक्निकल अफिसर: विनय बजगाईं
मार्केटिङ अफिसर: राजन खनाल
Account : +977-9843162261
© 2021 Khabar Express. All Rights Reserved.